Indawo YaseMoz: Khulisa Ubukhona Bakho Bendawo Obuku-inthanethi Ngokufakwa Kuhlu, Idumela, Nokuphathwa Kweminikelo | Martech Zone
Njenge iningi labantu funda futhi uthole amabhizinisi endawo online, ukubakhona okunamandla kwe-inthanethi kubalulekile. Imininingwane enembile mayelana nebhizinisi, izithombe zekhwalithi enhle, izibuyekezo zakamuva, nezimpendulo kuzibuyekezo kusiza abantu ukuthi bafunde kabanzi ngebhizinisi lakho futhi kuvame ukunquma ukuthi bakhetha ukuthenga kuwe noma oncintisana naye.
Ukuphathwa kohlu, uma kuhlanganiswe nokuphathwa kwedumela, kungasiza amabhizinisi endawo ukuthi athuthukise ukutholakala kwawo ku-inthanethi nedumela lawo ngokuwanika amandla okuphatha ezinye zezici ezibaluleke kakhulu kuzo zombili izivakashi nezinjini zokusesha. Ngezixazululo eziningi laphaya, kubalulekile ukucubungula izici ezinjengokusebenza, ubulula bokusebenzisa, nezindleko.
Ngokulawulwa kohlu okuzenzakalelayo nokusatshalaliswa kwedatha yendawo kumasayithi amaningi kanye nokuphathwa kwedumela, I-Moz Local ikuvumela ukuthi ugcine ngokushesha ukufakwa kuhlu okunembile, uphendule kuzibuyekezo, futhi uthumele izibuyekezo nokunikezwayo. Ithuluzi lethu elisebenziseka kalula lenzelwe ukukhulisa ukutholakala kwakho kwe-inthanethi kwasendaweni, ukukhulisa ukuzibandakanya kwabathengi, nokwenza ngcono ukubonakala kwakho ekusesheni kwasendaweni nesikhathi esincane nomzamo. Yakhelwe zonke izinhlobo zezinkampani, kusuka kumabhizinisi amancane kuya kumabhizinisi amakhulu, amabhizinisi angashadile kuya ezindaweni eziningi, nama-ejensi.
Gcina Izinhlu Ezinembile
Nge-SEO yendawo, udaba lokufakwa ohlwini oluphelele nolunembile. Ukugcina ikheli, amahora wokusebenza, nezinombolo zefoni zingaguquguquki futhi zisesikhathini kubalulekile ukusesha kanye nesipiliyoni samakhasimende. I-Moz Local ikusiza ukuthi udale futhi uphathe kalula ukufakwa kuhlu kwebhizinisi lakho kwasendaweni ku-Google, Facebook nakwamanye amasayithi ukusiza abathengi ukuthi bathole futhi bakhethe ibhizinisi lakho.
Ungabuyekeza konke ukufakwa kuhlu kwakho kudeshibhodi eyodwa, futhi ufunde ukuthi iyiphi idatha, izithombe, noma okunye okuqukethwe okudingekayo ukuqedela ukufakwa kuhlu kwakho namaphrofayili ukuze abathengi bakwazi ukuthola ngokushesha ukuthi ibhizinisi lakho lenzani nokuthi lilungele yini kubo. Ukufakwa kuhlu kusatshalaliswa ngokuzenzakalela kunethiwekhi yethu yozakwethu, nangokuvunyelaniswa kokufakwa kuhlu okuqhubekayo, izinhlu zakho zihlala zibuyekezwa kuzinjini zokusesha, izinkomba ezikwi-inthanethi, imithombo yezokuxhumana, izinhlelo zokusebenza, kanye nezihlanganisi zedatha ezinesikhathi esincane namandla. Futhi inqubo yethu ezenzakalelayo yokukhomba, ukuqinisekisa nokususa ukufakwa kuhlu okuyizimpinda kusiza ukuqeda ukudideka.
IMoz Local iphinde ikunikeze izinkomba zokusebenza ezibalulekile, njenge-Visibility Index, amaphuzu okuba khona ku-inthanethi, namaphuzu okuphelela kwephrofayili. Izokwazisa futhi ukuthi uthathe nini isinyathelo ngezixwayiso nezaziso zezinto ezidinga ukunakwa.
Sisebenzisa iMoz Local ukuqapha isimo sethu sohlu, ukubona kalula ukubonakala kohlu lwethu ekusesheni nasekuqondeni ukusebenza kohlu emazingeni ehlukene. Sikwazile ukuphusha imininingwane engaguquguquki yohlu kwizikhombisi ezinkulu futhi sijabule ngemiphumela esiyibonile.
David Doran, Umqondisi Wecebo ku I-Oneupweb
Bheka Ukufakwa Kuhlu Kwakho Kwebhizinisi Mahhala
Phatha Idumela Lakho
Ezingeni lasendaweni, ukubuyekezwa kungenza noma kuphule ibhizinisi. Ngaphezulu U-87% wabathengi uthe bakwazisa ukubuyekezwa kwamakhasimende futhi ama-48% kuphela angacabanga ukusebenzisa ibhizinisi elinezinkanyezi ezingaphansi kwezine. Eqinisweni, amabhizinisi amancane kungenzeka angabonakali nasemiphumeleni yosesho uma ukubuyekezwa kwawo kungahlangabezani nomkhawulo othile.
Ukubuyekezwa okuhle kungasiza ekukhuphuleni izinga lakho lokusesha le-organic, kepha impendulo yangempela ekubuyekezweni okungekuhle noma okuxubile ikhuthaza nokuxhumana okwengeziwe nebhizinisi lakho futhi inikeze nombuyekezi ithuba lokushintsha amaphuzu abo.
IMoz Local ivumela abasebenzisi ukuthi babheke kalula, bafunde futhi baphendule izibuyekezo kuzinjini zokusesha nakuwebhusayithi kusuka kudeshibhodi eyodwa. Ukuphathwa kwegama kubaluleke kakhulu kwi-SEO nomkhiqizo wakho, futhi iMoz Local ithumela izibuyekezo zesikhathi sangempela nezaziso lapho kuthunyelwa isibuyekezo esisha. Ngaphezu kwalokho, ideshibhodi ikuvumela ukuthi ulandele izitayela ezibuyekezweni, ukhethe amagama angukhiye athile nezilinganiso ezibonakala kuzibuyekezo eziningi. Lezi zinkambiso zinikeza impendulo ebalulekile evela kubathengi ngalokho ibhizinisi lakho elenza kahle nokuthi yini engadinga ukuyilungisa.
Yabelana ngezibuyekezo nokunikezwa
Ukubandakanya abathengi ngaphezu kwemizuzwana embalwa kuya kuba nzima ngosuku. Ngamanye amasayithi amaningi, izixhumanisi, nolwazi olutholakala ekhasini lokuqala lemiphumela yosesho, ukuphuma kwabaqhudelani kuyinselele.
Lokho abathengi abasabela kukho futhi bahlanganyele nakho, noma kunjalo, ukuvuselelwa nokunikezwa okuvamile. Ukugcina abathengi bazi ngezindaba zakamuva mayelana nebhizinisi lakho, imikhiqizo emisha noma izinsizakalo, noma ukunikezwa okukhethekile kungabathonya ukuthi bathenge kuwe. Ungabelana ngezindaba ku-Facebook noma uthumele Imibuzo nezimpendulo kuphrofayela yakho yebhizinisi le-Google kusuka eMoz Local.
IMoz Local ikusiza ukuphatha kalula ukufakwa kuhlu kwebhizinisi lendawo nedumela lakho kuGoogle, Facebook nakwamanye amasayithi ukusiza abathengi ukuthi bathole futhi bakhethe ibhizinisi lakho. Idizayinelwe ukukhulisa ukutholakala kwebhizinisi lasekhaya online, ukukhulisa ukuzibandakanya kwabathengi, nokwenza ngcono ukubonakala ekusesheni kwasendaweni nesikhathi esincane kanye nomzamo.
Sithole iMoz Local njengeplatifomu enhle yokusiza ukukhulisa ukubonakala kwendawo kwamakhasimende ethu. Njengoba izinjini zokusesha zenza imiphumela isuselwe endaweni yomsebenzisi, iMoz Local ingaba nomthelela omkhulu kuthrafikhi ephelele.
Niall Brooke, Umphathi we SEO ku Isi-Matalan
Thola Okungaphezulu NgeMoz Local
Tags: izinkomba zebhizinisiqoqa izibuyekezoIsiqondisiukuphathwa kohluukunikezwa kwebhizinisi lendawoizilinganiso zendawoukubuyekezwa kwasendawenimozmoz yendawoukuphathwa kwedumelaipulatifomu yokuphathwa kwedumelaukubuyekeza ukuphathwa